निर्मला बलात्कार र हत्याः नेपाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत | Suvadin !
निर्मलाको बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधीलाई हाम्रै राज्यसत्ताको मालिक र स्थापित क्रुर शासक जातिको निरंकुशतामा मौलाएको आपराधिक व्यवस्थाको रक्षा गरेजसरी संरक्षकत्व प्रदान गर्ने तल्लोस्तरको कर्म किन गरिँदैछ? कञ्चनपुरबासीसँगै आमदेशबासी न्यायका निम्ति संघर्ष गरे। संघर्षलाई सरकारी सुरक्षाकर्मीका तर्फबाटै हिंसात्मक बनाइयो। बलात्कारीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सर्वसाधारणको जायज माग दबाउन प्रहरीको बन्दुक चल्यो। र, निहत्था किशोरको हत्या गरियो।
Jyoti Kiran Rijal
Sep 29, 2018 21:02
निर्मला पन्त र लेखक ज्याेतीकिरण रिजाल।
Shared: 142 times | Share this on
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका विषयमा केही लेख्न प्रारम्भ गर्दैगर्दा मेरा हातका औँलाहरु आक्रोश र पीडाले कापिरहेका छन्। निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरण अझै पनि रहस्यको गर्भमै छ। बलात्कारी को हो? पृष्ठभूमि के हो? भन्ने प्रश्नको जवाफ आइसकेको छैन। तर, एउटा कुरा चाहिँ निश्चित हो, बलात्कारी आफैँमा अमानवीय कुकृत्यकर्ता हो। तर, उनको बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधीलाई हाम्रै राज्यसत्ताको मालिक र स्थापित क्रुर शासक जातिको निरंकुशतामा मौलाएको आपराधिक व्यवस्थाको रक्षा गरेजसरी संरक्षकत्व प्रदान गर्ने तल्लोस्तरको कर्म किन गरिँदैछ? कञ्चनपुरबासीसँगै आमदेशबासी न्यायका निम्ति संघर्ष गरे। संघर्षलाई सरकारी सुरक्षाकर्मीका तर्फबाटै हिंसात्मक बनाइयो। बलात्कारीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सर्वसाधारणको जायज माग दबाउन प्रहरीको बन्दुक चल्यो। र, निहत्था किशोरको हत्या गरियो।
न्याय माग्दा गोली खानुपर्ने जनताको नियति आफैँमा प्रजातन्त्र र कानूनी राज्यलाई सुहाउने कुरा थिएन। सारा जनतालाई प्रष्ट छ कि, बलात्कारी र हत्यारालाई जोगाउने अपराधीलाई छोप्नका लागि निर्दोश मानिसको हत्या गरियो। र, क्रुर दमनमार्फत सयौं मानिसको न्यायको आवाजलाई कुल्चिने र दबाउने कुचेस्टा गरियो। यति हुँदासम्म पनि जनताले प्रहरीसँग हत्यारालाई कारबाही हुने कुरामा विश्वास गुमाई सकेका थियनन्। तर, जब साँचो अर्थमा निलम्बनमा परेका कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज बिष्ट लगायतका केही प्रहरी टिम नै अपराधका प्रमाणहरु लुकाउन र नष्ट गर्न सक्रिय रहेका सत्यहरु बाहिरन थाले, तब जनताको मन झनै कुडिएको सत्यलाई सरकारले किन अवमूल्यन गर्न खोज्यो? आश्चर्यजनक कुरा भएको छ।
विश्वभरका जनतालाई थाहा छ कि, निर्मला पन्त बलात्कारमा संलग्न मानिस सामान्य पहुँच भएको व्यक्ति होइन। यो कुरा त प्रहरीको व्यवहारले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। विश्वका कुन मानिसलाई स्वीकार्य होला, जो प्रहरीले नै हत्यारा र बलात्कारीको संरक्षणमा संलग्न रहेर घटनाका प्रमाणहरु नष्ट गर्ने भूमिका खेलोस्। यहाँ त्यस्तै असह्य घटना भएको छ। यो सामान्य कुरा कदापि होइन। संसारका असफल राष्ट्रहरुमा पनि अपराधीलाई यस्तो नांगो उन्मुक्ति मिलेको हुँदैन। तर, मुलुक सबल छ, बलियो छ, आत्मानिर्भर छ भन्दा–भन्दै र ठान्दा–ठान्दै पनि न्याय मर्नुलाई कसरी हेर्ने? यतिबेला राष्ट्रको न्याय प्रणालीमाथि औँला उठाउने काम प्रहरी संगठनभित्रकै केही व्यक्तिहरुबाट पटक–पटक हुँदै आएको छ। जसले कानूनको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएको हुन्छ, त्यहाँभित्रकै जम्मेवार व्यक्ति कानूनको धज्जी उडाएर अपराधमा लाग्छ भने स्पष्ट बुझ्नु पर्छ कि, त्यस्ता प्रहरीहरु राज्य आतंकका मतियार हुन्छन्। अहिलेको सन्दर्भमा निलम्बित एसपी बिष्ट र उनको टिमका मतियारहरु राज्य आतंकका नायक बनेको सत्य अब कसैसामू कसैले पनि लुकाउन सक्दैन।
कसरी भयो नेपाल प्रहरीको बेइज्जत?
घटनाको शुरुमा निर्मला हत्याको अनुसन्धानमा खटिएको बिष्ट नेतृत्वको कञ्चनपुर प्रहरीले जसरी घटनाको यथार्थलाई दबाउने कुकर्मी हर्कत गर्यो, ती हर्कतहरु नै नेपाल प्रहरीको विश्वव्यापी बेइज्जतको थप कारण बन्न पुगेका छन्। यही वर्ष सुनकाण्ड, फर्जी प्रमाणपत्र तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल हुँदै निर्मला बलात्कार र हत्यासम्म आइपुग्दा नेपाल प्रहरीको ‘राष्ट्रप्रतिको सम्मान र सेवा’ छुताछुल्ल भएको छ।
एसपी बिष्ट नेतृत्वको प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया ज्यादै अस्वाभाविक निन्दनीय र दुःखद छ। सुन्दा र भन्दा अप्रिय लागे पनि प्रहरी अनुसन्धान प्रक्रियाले निर्मलाको मृत लासमाथि समेत बलात्कार गर्यो। निर्मला हत्याको अनुसन्धानमा खटिएको बिष्ट नेतृत्वको टोलीले मानवअधिकारको धज्जी उडाउने काम मात्र गरेको छैन, उसले मानवता गुमेको आफ्नो आमानवीय चरित्र पनि उदांगो पारेको छ।
एसपी डिल्लीराज बिष्ट र ज्ञानबहादुर सेठीले निर्मलाको लासबाट प्रमाण नष्ट गर्न उनले लगाएका कपडा फुकालेर पखाल्न लगाए, पछि जलाए। निर्मलाका पिताको किर्ते हस्ताक्षर गरिए। एक महिला प्रहरीलाई खटाएर निर्मलाको गुप्ताङ्ग पखाल्न लगाए। वास्तवमा बलात्कृत निर्मलाको मृत शरीरमाथि पुनः अत्याचार गर्न निर्देशन दिने बिष्ट र सेठी निर्मलाको बलात्कार गर्ने बलात्कारीभन्दा कम दोषी होइनन्। उनीहरुलाई त्यति अपराध मात्र गरेर पुगेन, बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिन समाजमा भएका रोगी र मानसिक सन्तुलन गुमेका मानिसहरुलाई यातना दिएर जबरजस्ती अपराधी साबित गर्न पञ्चायती षडयन्त्रको दुश्चक्र रच्ने दुस्शाहस गरे। जब त्यस्तो अन्यायविरुद्ध कञ्चनपुरमा जनआक्रोश उम्लियो, जनता शान्तिपूर्ण रुपमा हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर सडकमा आए त्यो न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाएर शनी खुन्नाको हत्या गरे। दर्जनौं मानिसलाई घाइते बनाए।
त्यसपछि पनि बिष्टका अपराधका श्रृंखला रोकिएनन्। बिष्टले निर्मलाको हत्यामा संलग्न भनी आशंका गरिएका बबिता बम र रोशनी बमको घरमा रङरोगन गर्न लगाए, प्रमाणको आधार रहेको अम्बाको रुख काट्न लगाए। वास्तवमा सम्पूर्ण रुपमा उनले प्रमाण नष्ट गर्न भ्याए। र, उनलाई काठमाडौं तानियो र अहिले सामान्य रुपमा निलम्बनको कारबाही गरिएको छ। एउटा प्रहरी अधिकृत एउटा अपराधलाई लुकाउन यतिसम्म हर्कत गर्न सक्छ भने निर्मला हत्या र बलात्कारमा उ संलग्न छैन भन्न सकिन्छ प्रहरी महानिरीक्षक सवेन्द्र खनाल ज्यू? अपराधको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने कार्यदलको एउटा सदस्य गृहमन्त्रीकै बचन नपाउञ्जेलसम्म आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैन भने के त्यहाँ अपराधमा प्रहरी अधिकृत निर्दोश छ भन्न सकिन्छ?
एउटा नांगो सत्य यही हो कि, निर्मलाको हत्यामा को हो? भन्ने विषयमा बिष्ट र सेठीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर, प्रहरीले किन उनीहरुमाथि सक्रिय अनुसन्धान गर्नका लागि नियन्त्रणमा लिदैन? वास्तवमा यस्तै पात्र र चरित्रबाट अहिले नेपाल प्रहरीको विश्वभर बेइज्जत भएको छ। प्रहरी असफल सावित हुनु, प्रहरी अधिकृतबाटै राज्य आतंकको सिर्जना हुनु र विश्वभर प्रहरी संगठन बेइज्जत हुनु मुलुक असफल हुने संकेत मात्र होइन, संसारभर नेपाली असुरक्षित बन्ने कुरा पनि हो। यस्तो कुरामा सरकार र प्रहरी नेतृत्व गम्भीर बन्न र पीडितले न्याय पाउन जरुरी छ।